DAAWO SAWIRRO: Qado sharaf maanta Garoowe loogu sameeyay Odayaasha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Qado sharaf maanta Garoowe loogu sameeyay Odayaasha dowlad deegaanka Soomaalida...
DAAWO SAWIRRO: Qado sharaf maanta Garoowe loogu sameeyay Odayaasha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya
Garoowe (Halqaran.com) – Odayaasha Dhaqanka ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya (DDSI) oo maalmahaanba booqasho ku joogay Magaalada Garoowe ayaa Sabtidii maanta qado sharaf loogu sameeyay magaaladaasi.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland ahna Kusimaha Madaxweynaha, Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa Odayaasha Dhaqanka qado sharaftan ugu sameeyay meel bannaanka ka yara ah Magaalada Garoowe.
Axmed Karaash ayaa waxaa kulankan qado sharafta ah ku wehlinayay Wasiiro, Xildhibaano iyo Hoggaanka Dhaqanka Puntland.
Odayaasha Dhaqanka ee DDSI oo uu hoggaaminayo Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Garaad Dool ayaa maalintii Khamiista soo gaaray Magaalada Garoowe, iyadoo ujeedada ay u yimaadeen ay la xiriirto, sidii loo dhameen lahaa dadaalada lagu soo geba-gabeynayo xal u helidda dagaaladii dhawaan beelo walaalo ah ku dhex maray Deegaanka Dhumay ee Gobolka Sool.
Kusimaha Madaxweynaha Puntland oo boggaadiyay socdaalka Odayaasha DDSI ka yimid ayaa dhanka kale ku ammaanay, sida ay ugu soo gurmadeen joojinta dhiigga beelihii walaalaha ahaa ee ku wada dagaalamay Dhumay.
Odayaasha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya
Qado sharaf maanta loogu sameeyay